September 2018 – Kalfadhi
September 30, 2018 Kalfadhi
Maalin Sabti 29-kii bisha Sibteembar 2018 ayuu dhacay kulankaas, waxaana soo xaadiray 156 mudane, halka ay maqnaayeen 118 mudane. Laba kursi ayaana Golaha Shacabka ka bannaan. Ajandaha ayaana ahaa sii waddida kulanka doodda xeer-hoosaadka Golaha Shacabka oo laga soo shaqeynayay muddo sanad ah. Guddoomiye Maxamed Mursal ayaa kulanka daahfuray waxa uuna xildhibaannada uga mahad celiyay sida ay waqtiga u dhawreen. Intaas kaddib xildhibaannada ayaa guda galay doodad xeer-hoosaadka. Halkaan ka daawo doodad oo dhammeystiran.
Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuduudaha iyo Federaalka ayaa kulan ay la qaateen guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxaa diiradda lagu saaray suurta galnimada in la ballaariyo soohdimaha caasimadda. Duqa magaalada Muqdisho mudane Yariisow ayaa u soo jeediyay Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuduudaha iyo Federaalka Somalia in soohdinta caasimadda lagu xadeeyo webiyada Afgooye iyo Balcad maadama ay caasimadda hadda ay marti galinayso barakacayaal badan oo gudaha iyo daafaha caasimaddaba ku nool sidaas darteedna loo baahan yahay in la ballaariyo. Guddoomiye Yariisow ayaa yiri “ Maadaama uu…
September 28, 2018 September 28, 2018 Kalfadhi
Wikipedia waa bogga online-ka ah ee ugu weyn adduunka ee lagu keydiyo xogta iyo macluumaadyada kala duwan. Laakiin waxaa bogga ka dhex jirta isku-dheelli-tirnaan la’aan, sida guud ahaan dunidaba ay uga jirto: Sagaashan boqolkiiba kuwa uu macluumaadkooda ku jiro waa rag, iyadoo qoraallada dumarka ku saabsan ay afar laab ka badan yihiin kuwa ragga. Waxaan rabnaa inaan gacan ka geysanno wax ka beddelka arrintan. Waxaan 8-dii Maarso daah-furnay sooyaallo taxane ah oo laga qoray haween Soomaaliyeed. Hadda waxaan dooneynaa inaan sii ballaarinno oo wax badan aan ka qorno sooyaalka haweenka…
Maaddada “S iyaasiga Faraxsan & kan Xanaaqsan “ oo carruurta iskuullada Xamar dhigata lagu soo kordhiyey manhajkooda! Buug uu qoray Mudane Maxamed C/hi Farmaajo. “ Goob walba kalimadeeda ayey leedahay لكل مقام له مقال! Goob tacsi taallo loogama warramo damaashaad, goob dib u heshiisiin lagu hayana laguma xuso dagaal hadalladiis, akhyaar waaweyn sheekada caruurta looma sheego, ilmo yaryarna sheeko odoyeed ma xamili karaan.. iwm. ilmo yaryar oo iskuullay ah, guryahoodii salaaddii subax ka dib laga soo kaxeeyey, ayagoo dharkii iskuulka ku labisan oo aan quraac soo cunin hool lagu soo…
September 27, 2018 Kalfadhi
Guddiga Difaaca Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xooga dalka. Waxana kulanka guddoomiyaya guddoomiyaha guddiga difaaca ee Golaha Shacabka Xuseen Carab Ciise. Guddiga ayaana u yeeray wasiirka iyo taliyaha, waxa uuna daba sicday dooddii Golaha Shacabku ay saddaxda maalin qaadatay ay ka yeesheen arrinta amniga guud ee dalka. Su’aalo hordhac ah ayaa lagu waydiiyay iyagoo codasaday in kulan kale loo balamo wasiirka iyo taliyaha waxaan al isla gartay in Sabtida ay wada kulmaan
Tobankii bishaan dhammaadka ah ee Sibteembar ayey ahayd in Aqalka Sare uu furmo, balse guddiga joogtada ah ee Aqalka Sare kulan ay qaateen waxa ay ku sheegeen in sababo farsamo uusan Aqalku furmeyn. Warbaahinta Kalfadhi ayaa baaritaan badan ku sameysay sababta uusan Aqalku u furmin, iyadoo inta badan xildhibaannada Aqalka Sare ay joogaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sanatar Xuseen Shiikh Maxamuud oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay in Aqalku uu u xiranyahay sababo amni oo xildhibaannadu ay isku aamini waayeen amniga xarunta ay ku shiraan. Xukuumadda ayuu sheegay in…
September 26, 2018 September 26, 2018 Kalfadhi
Tobankii bishaan Sibteembar ayaa si rasmi ah loo furay kalfadhigii afaraad ee Golaha Shacabka, kulan uu hadal jeedin ka sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Ah Soomaaliya. Xanta, hadal heynta iyo utunta ugu weyn ee xildhibaannada Golaha Shacabku ay dareemayeen waxa ay ahayd in kalfadhigii saddexaad aysan wax shaqo ah oo la taaban karo u qaban shacabka ay matalaan. https://www.kalfadhi.com/2018/07/20/golaha-shacabka-11-kulan-shan-kun-oo-doolar-iyo-saddex-bil-oo-fasax-ah/ 15-kii bishaan ayeey yeesheen kulankoodii ugu horreeyay, waxaana lagu qeybiyay xeer-hoosaadka Golaha shacabka. Golaha Shacabka Oo Maanta Yeelanaya Kulankoodii Koowaad Ee Kalfadhiga Afaraad Waxaa xigay saddex kulan oo xiriir ahaa kuwaas oo…
Guddoonka Golaha Shacabka ayaa xarunta soo xaadiray waqtigii ballanku ahaa in xildhinaannadu ay billaabaan sii wadadiida doodda xeer-hoosaadka oo qabyo ahayd. Waxa uuna ahaa kulankii 7-aad ee kalfadhiga afaraad. Nasiib darrase 120 mudane ayaa soo xaadiray 273 mudane oo hadda u diiwaan gashay Golaha Shacabka. Waxaana guddoonku uu nasiib darro ku tilmaamay in kooramkii oo aan buuxsamin darted uu u baaqday kulankii Golaha Shacabka ee maanta. Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka C/wali Shiikh Ibraahim ayaa nasiib darro ku tilmaamay in maalinka Mooshin uu jiro xildhibaannadu wada yimaadaan, maalmaha…
Billowgii sanadkan 2018-ka war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada waxaa lagu sheegey in madaxweyne Farmaajo uu joojiyay iibinta, hibaynta, kireynta iyo bixinta dhulka danta guud ee Muqdisho. War saxafadeedka ayaa lagu yiri “ Illaa inta laga soo saarayo habraacyada sharci ee waafaqsan qodobka 43-aad ee dastuurka, dhulka dowladda lama hibeyn karo, bixin karo, lamana wareejin karo.” Madaxweynaha ayaa intaa ku daray “ Hadii uu jiro muwaadin iibsaday ama kireystay dhul danta guud kaddib 8-dii Febraayo 2017 waxaan u sheegayaa in iibsigaas uu yahay mid sharci darro ah.” Magaalada Muqdisho oo…
Golaha Shacabka ayaa maanta ku kulmi doona xaruntooda, waxayna sii wadi doonaan ka doodosta xeer-hoosaadka. Dood dheer oo ay yeesheen Isniintii lasoo dhaafay ayey xildhibaannadu kaga doodeen xeer-hoosaadka ay ku shaqeyn doonaan. 18 mudane oo is qortay waxaa ka hadlay kaliya 8 mudane. Maanta ayaana la filayaa in ay inta kale hadlaan. Halkaan ka daawo guddiga soo diyaariyay xeer-hoosaadka oo sharraxaya qaabka ay usoo diyaariyeen.